I-china 92 ​​alumina ceramic lining tube for abrasion kunye ne-corrosion yesisombululo esinganyangekiyo mveliso kunye nabathengisi | YUNFENG
I-92 alumina ceramic lining tube yokurhabaxa kunye nesisombululo esinganyangekiyo
Faka ipeyinti enganyangekiyo yodongwe Isetyenziswa ngokubanzi kwisinyithi, imigodi, umbane, amalahle, ipetroli kunye namanye amashishini, igesi eqinileyo, inkqubo yokuhambisa ulwelo eqinileyo, ngakumbi kumonakalo omkhulu owenzeka engqinibeni, amakhonkco amathathu. Ukuxhathisa ukunxiba ngokugqwesileyo Ukwamkela ii-alumina ceramics njenge-liner, ixesha lokuphila lombhobho lingaphezulu kwamaxesha ali-10 kunentsimbi eqhelekileyo eqinileyo. Nokumelana Alumina yodongwe ineenzuzo kukhukuliseko lwamanzi olwandle, acid kunye nokumelana kwealkali, kwakhona ukukala ukhuseleko. Ukuxabana ...
Nxiba umbhobho we ceramic onganyangekiyo
Ngokubanzi isinyithi, imigodi, umbane, amalahle, petrochemical kunye namanye amashishini, igesi eqinileyo, inkqubo yokuhambisa ulwelo eqinileyo, ngakumbi kumonakalo omkhulu owenzeka engqinibeni, amakhonkco amathathu.
Ukuxhathisa ngokufanelekileyo ukunxiba
Ukwamkela iiseramikhi ze-alumina njenge-liner, ixesha lokuphila lombhobho lingaphezulu kwamaxesha ali-10 kunentsimbi eqhelekileyo eqinileyo.
IAalumina ceramic inezibonelelo zokukhukuliseka kwamanzi olwandle, i-asidi kunye nokumelana nealkali, kunye nokukhusela ukhuseleko.
Umphezulu wangaphakathi ogudileyo kwaye ngaphandle kokhukuliseko lomhlaba, ukutyibilika ngaphakathi kwemibhobho kungaphezulu kwayo nayiphi na eminye imibhobho yesinyithi.
Umbhobho odityanisiweyo unokuba lixesha elide usebenza phantsi kweqondo lobushushu le -50-800 ℃.
iqondo eliphezulu lobushushu ceramic
Ingasetyenziswa njengebhola ethweleyo, iroller, isihlalo sebhola, izixhobo, izixhobo zokusika ezintsha ze-ceramic, impompo yepiston, ukutywina izinto kwishishini loomatshini;
Ingasetyenziselwa ukuvelisa ipleyiti yomoya yevalve kathathu kunye ne-preheater tube yangaphakathi kushishino lwesamente ,;
Ingasetyenziselwa ukunxiba kunye nokumelana nezinto ezinjenge-valve yebhola, ipompo yomzimba, i-carburetor yokutsha kunye nefilitha kumzi mveliso weekhemikhali.
Ingenziwa ukulungiselela ukuveliswa kwezinto zesinyithi sokubumba kunye nokwenza izinto zokufa, njengokuphuma ngaphandle, i-mandrel, i-extrusion, ukufowunela ucingo, ukuqengqeleka, ukuhambisa iroller, ukufudumeza umzimba, umbhobho weshushu oshushu, ukuxhasa ubushushu ngesinyithi , Umtya wealuminium wawutyabeka umgca kwimizi yensimbi.
Ingasetyenziselwa izithuthi ezixhobileyo, isisu seenqwelomoya, iimpahla ezinobungqina bembumbulu, umbhobho wokukhupha irokethi kunye neminye imisebenzi enobushushu ephezulu kumzi mveliso we-aerospace;
Egqithileyo Ukunxiba kunye nefuthe lokumelana ne-92 alumina ceramic lining cone tube / taper tube for mining conveyor pipeline
Okulandelayo: Iiringi ezinamathelayo ezinganyangekiyo
92% 95% Yokunxiba iAlumina yodongwe Tube yombhobho engqinibeni yesinyithi esenziwe ngumenzi
Alumina yodongwe ngaphakathi Line Coal Pipe For Wear Resistance
Umbhobho we-Ceramic Linear elbow Pipe ngoKhuseleko oluPhezulu
Nxiba i-Abrasion Resistant Alumina Ceramic Lining Elbow Pipeline